Voamadinika | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Famafazana sy fikarakarana sakafo ho an'ny milete
Lavitra ny olon-drehetra dia mahalala ny zava-maniry. Millet dia zavamaniry isan-taona voaangona ho an'ny fianakaviana voankazo. Ny kolontsaina dia manana tongolo boribory maromaro misy kofehy maromaro maromaro miala amin'ny fotony. Ny felam-boninkazo dia paniculata, ny voninkazo tsirairay dia manana voninkazo roa - bisexual sy asexual. Ny sofin'ny zavamaniry dia mihevaheva eo amin'ny andaniny ary miolakolaka eo amin'ny iray hafa.
Torohevitra ho an'ny fambolena sy fambolena sorghoma
Ny sorghum varimbazaha dia iray amin'ireo trondro maina, fodiana ary sakafo voajanahary indrindra, izay fantatra betsaka amin'ny ankapobeny ho toy ny sakafo mifangaro amin'ny biby. Vao haingana, ity ahitra ity dia nahazo laza malaza teo amin'ny mpanohana ny sakafo mahavelona sy ny sakafo ara-tsakafo, izay manoro hevitra ny sorghum ho tafiditra ao amin'ny sakafo ho an'ireo izay mijery ny lanjany.
Mampitombo sy maniry sorghum ho an'ny fambolena voajanahary, fanangom-bokatra ary ala
Sorghum dia zavamaniry tsy dia fantatra loatra any amin'ny faritra misy antsika, izay mitombo any Afrika, Azia, ny faritra roa any Amerika, Aostralia ary Eoropa. Ny kolontsaina dia manana ny lanjany ara-tsakafo ary ampiasaina betsaka amin'ny sakafo an-trano. Ny zavamaniry dia fitaovana miorina amin'ny famokarana lafarinina, lafarinina, alika (bioethanol) ary cereal, ary koa ny tantely sorghum.
Mampiasà rogosy toy ny siderata
Mihamitombo hatrany, eo amin'ny toerana misy anay dia mitoetra ho siderat. Ny fambolena sidera dia loharano tsara amin'ny fangoroana voajanahary ary fomba hafa amin'ny fivalozana. Samihafa ny kolontsaina samihafa, fa ny malala-tanana no malaza indrindra. Rye ho siderat: singa Rye dia herintaona isan-taona ao amin'ny fianakaviana voankazo.
Rehefa avy nandray fanapahan-kevitra hamboly ny tany tamin'ny alahelony ianao, dia tsy diso ianao. Это беспроигрышный вариант хотя бы потому, что в агрономии культура широко используется в качестве зеленого удобрения и санитара грунта. Собранному урожаю тоже найдется применение - существует множество кулинарных и медицинских рецептов, главным ингредиентом в которых выступают зерна, отруби и даже стебли ржи.
Triticale: famaritana sy fambolena karazam-borona sy vary
Ny lahatsoratra dia nisafidy fitaovana natao hamantarana anao amin'ny voankazo tsy manam-paharoa, mitondra anarana mahaliana sy mahazatra - "triticale." Karazana zavamaniry inona, nahoana no namboly tricale ary inona ny teknolojian'ny fambolena azy, vakiana etsy ambany. Triticale - inona no Triticale - dia vokatry ny tanan'olombelona.
Inona no atao hoe vary orza?
Hatramin'ny fahazazana dia henontsika ny sakafo ara-pahasalamana mety sy mahasalama, ny singa fototra tokony ho lafaoro ho loharanon-tsokajin-tsolika tena ilaina. Ny iray amin'ireo mahasoa sy mahavelona indrindra dia ny haran-java-manitra. nandratra azy
Ny karazana varimbazaha tsara indrindra ho an'ny popcorn
Matetika, mandeha any amin'ny foibe kino na fialamboly, mividy siny feno popcorn isika. Tena marefo, ary ny sarimihetsika (na ny fampisehoana) dia mahaliana kokoa. Ity vokatra mampitony ity, izay misy kalôro vitsivitsy, dia azo atao ao an-trano. Top Sorts Fantatry ny olona rehetra ny popcorn. Avy amin'ny vary. Saingy tsy ny rehetra no mahafantatra fa tsy ny isan-karazany dia mety tsara amin'ny fanomanana azy.
Inona no mahasosotra tadidy mampidi-doza sy ny fomba hiadiana amin'izany?
Ny fanoheran'ny fano dia tsy mitoetra ao an-trano na any an-tanindrazana, manimba ny vokatra eny an-tsaha sy any amin'ny trano fitehirizam-bokatra, izay ahafahan'ity farany hajoro. Ny fitomboan'ny voamaina dia azo atao ny manamarika fa ny toetran'ny kalita dia niova. Ny fitaoman-tsarimihetsika samihafa dia afaka manimba ny kolontsaina, fa indrindra ny bug izay mety hiteraka fahasimbana lehibe, izay horesahina any aoriana any.
Herbicide "Granstar": fomba sy fotoana fampiharana, fampiasana
Ny herbicides dia efa hita hatry ny ela fa fitaovana mandaitra sy mahomby ho an'ny fifehezana tavy any amin'ny zaridaina na zaridaina. Ary na dia misy aza ny tranga dia tsy misy mpamboly afaka manao izany raha tsy "ireo fanafody". Ny "Granstar" dia anisan'ireo herbicides malaza indrindra. Ny endriky ny fatran-tsakafo sy ny fikarakarana Ny zavatra ataony dia vokatry ny singa manokana - tribenuron-methyl amin'ny 750 g / kg.
Herbicide "Helios": dosage, fampianarana
Maro ny zaridaina miatrika ny olana mahazatra ny tsimparifary matetika. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia ilaina ny mamantatra drôgika izay hanampy amin'ny ady amin'ny tsimparifary. Mampahatsiahy antsika ny lahatsoratra, izay hanolotra torolàlana momba ny fampiharana ny "heriophagy" Helios. Ny vatana, ny famoahana, ny fonosana Ny singa fototra ao amin'ny firafitry ny herbicide dia glyphosate, izay an'ny fôpôro-organika.
Mogar Chumiza (totozy): fikarakarana ny zavamaniry sy ny tombontsoa azo avy amin'ny ahitra
Ny taolam-paty, Mogar Chumiza, totozy, tselatra - ireo anarana rehetra ireo dia mifandraika amin'ny zavamaniry Setaria italica, izay hita any amin'ny faritra etsy sy ety. Manan-karena izy io, ampiasaina amin'ny fambolena, ny tontolo iainana sy ny fomba nentim-paharazana. Mianatra bebe kokoa momba ny akora simika, ny toetra mahasoa ary ny fomba fampiroboroboana ny orza.
Vidim-bary maimaim-poana ho an'ny lehilahy, vehivavy ary ankizy
Ny katsaka, izay antsoina koa hoe maizin-katsaka, dia fitaovana mavesatra ho an'ny famokarana sakafo sy sakafo ho an'ny biby fiompy. Ampahany betsaka amin'ny indostria, ny fanafody sy ny cosmetology izany. Momba ny fananganana azy, ireo toetra sarobidy, ny fampiasana sy ny fitehirizana ary horesahina.Ny singa kimiafika Meksikana dia zavamaniry mifangaro izay mahatratra efatra metatra ny haavony ary manitatra dimy metatra eo amin'ny tany.
Karazana varimbazaha malaza
Sweetcorn dia fantatry ny olon-drehetra hatramin'ny fahazazany. Ny voankazo goavana dia manana tsirony tsy manam-paharoa, ary tsy misy zavamaniry iray izay afaka mamerina farafaharatsiny ny tsiron'ny koban'ny katsaka. Androany, ity voankazo ity dia anisan'ny iray amin'ireo toerana goavana eo amin'ny vokatry ny fambolena vokatry ny tsy fisehony amin'ny fambolena sy ny fampiasana azy samihafa.
Ny fomba famokarana ny vokatra: ny tahan'ny fangatahana
Ny rano, ny hafanana, ny hazavana ary ny fiterahana dia ilaina amin'ny fampandrosoana ara-dalàna ny vokatra voajanahary ary ny fahazoana vokatra tsara. Ny zavatra manan-danja indrindra amin'ny voka-dratsiny taorian'ny oksizenina, karbona sy hydrogène dia mineraly - nitrogen (N), phosphorus (P) ary potassium (K). Na dia eo aza izy ireo eo amin'ny sehatry ny tany, dia tsy ampy ny isany, ka miteraka ny fangatahana fanafody simika.
Ny endriky ny vary, ny fambolena, ny vokatra
Ny varimbazaha dia iray amin'ireo karazan-tsakafo maneran-tany. Ity ahitra ity dia efa nobeazina hatramin'izay ary efa zaraina manerana izao tontolo izao. Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny toetra biôlôjika amin'ny varimbazaha lohataona, ary koa ny endriky ny endriky ny fambolena azy. Famaritana Ity karazan-kazo ity dia an'ny fianakaviana voankazo sy ny karazana Wheat.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Voamadinika